သနား စရာ ကဗျာ.။
လူရမ်းကားတွေ ဖြစ်နေကြပါရော့လား ။
မင်းတို့ဘ၀က သနားစရာပေါ့ ။
ဤ ကဗျာ အား ပြည်တွင်းမှ ကိုယ်တိုင် ရေးသားပေးပို့ ပေးသော ကဗျာဆရာ ငထ(ဘလုပ်မြေ) အားကျေးဇူးတင်
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, December 26, 2009 Links to this post
ကလိမ်ကကျစ် ကကြိုးဆွဲနေတဲ့ မိန်းမယုတ် လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းနဲ့မလွန်ဆန်ရဲဘဲ လိုရာကြိုးဆွဲကနေရတဲ့ အောင်ဆန်းဦး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အနှောင့်အယှက်ပေးနေတဲ့ အောင်ဆန်းဦးနဲ့လဲ့လဲ့နွယ်သိန်း
အကြောင်းပြောရရင်အောင်ဆန်းဦးတို့ရဲ့နေအိမ်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဒီဂို(SanDiego)၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် (California) မှာ ရှိပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ခံယူထားကြတဲ့
တွေရေးနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အောင်ဆန်းဦးနဲ့လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းတို့ ဟာ နအဖအာဏာရူးတွေနဲ့
ဆက်ဆံရေးပြုလုပ်ပြီး ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရေးတွေ တည်ဆောက်နေကြပါတယ်။ အာဏာရူး နအဖ
အောင်ဆန်းဦးနဲ့ လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းတို့ အနေနဲ့ မိမိကိုယ်ကျိုးစီးပွားရေးအတွက် လုပ်နေရုံတင်
မဟုတ်ဘဲ၊နအဖအလိုကျတင်မဟုတ်ဘဲကိုယ်ကိုတိုင်ကပါမြန်မာပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘာလို့ အနှောင့်အယှက်ပေးတာတွေ လုပ်နေရတာလည်းဆိုရင်
အောင်ဆန်းဦးရဲ့ မိန်းမ မိန်းမယုတ် လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းကြောင့် အစပြုတယ် ဆိုရပါလိမ့်မယ်။
လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းဟာမြန်မာပြည်ကိုသွားရောက်လည်ပတ်စဉ်မှာအကြားအမြင်ဗေဒင်ဆရာတစ်ဦးဆီကို သွားရောက်ပြီး “သူမရဲ့ ယောင်္ကျား အောင်ဆန်းဦးအနေနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ဝန်ကြီးချူပ် ဖြစ်ဖို့ရှိပါသလား”
လို့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ အောင်ဆန်းဦးကို ၀န်ကြီးချူပ်ဖြစ်စေလိုတာထက် လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံ
ရဲ့ဝန်ကြီးချူပ်ကတော် သမတကတော် ဖြစ်လိုနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့First Lady လို
မျိုး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့first lady အဖြစ် စိတ်ကူးယဉ် ရူးသွပ်နေသူဖြစ်ပါတယ်။
လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းဟာဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းသမီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မှာမနာလိုစိတ်တွေ များပြားနေတာကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဘ၀ ပျက်စီးရေးအတွက် ဖျက်လို့ ဖျက်ဆီးနဲ့ ယုတ်မာ
သော ကလီကမာ ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်နဲ့လုပ်ကြံနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆောင်ရွက်ဖို့ အတွက် ပထမဦး
ဆုံး စတင်တာကတော့ ယောင်္ကျားဖြစ်သူ အောင်ဆန်းဦးကို အသုံးချတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လဲ့လဲ့နွယ်သိန်း
ဟာအောင်ဆန်းဦးအပေါ်အကြပ်ကိုင်အနိုင်ယူထားတဲ့အချက်တွေကိုခုတုံးလုပ်ပြီးအောင်ဆန်းဦးကို ရုပ်သေးရုပ်တစ်ရုပ်လို ကြိုးဆွဲကစေခဲ့ပါတယ်။
အောင်ဆန်းဦးဟာ ညီမရင်းဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ဖခင်ဖြစ်သူ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း
မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ကြည်တို့ ရဲ့မျက်နှာကိုမှ မထောက်ဘဲ မိန်းမယုတ်ဖြစ်သူ လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းရဲ့ 
ပြောဆို ခိုင်းစေသမျှကိုသာ နာခံပြီး တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအကျိုးကို ကိုယ်ကျိုးမဘက်ဘဲ စွန့် လွှတ်
အနစ်နာခံ မှုပေါင်းများစွာနဲ့ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အကိုရင်း
ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်က မညှာမတာ ဖျက်လို့ ဖျက်ဆီးလုပ်ရက်ခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းဟာ အောင်ဆန်းဦးနဲ့မရယူခင်မှာ ယောင်္ကျားရှိခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပါတယ်။ လည်ပတ်
လွန်းတဲ့ လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းဟာ ဂုဏ်ပကာသနတွေ မက်မောသူဖြစ်ပြီး ကိုယ်ကျိုးအတ္တကြီးမားသူဖြစ်
်တဲ့အလျောက် အောင်ဆန်းဦးကို အရယူခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်ဆန်းဦးအနေနဲ့လဲ့လဲ့နွယ်သိန်း
ရဲ့ချယ်လှယ်မှုကို မလွန်ဆန်ရဲတာရော ကျန်းမာရေးမကောင်းမွန်မှုများအရရော မိန်းမယုတ်
လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းရဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုတွေအရ နောက်ဆုံးမှာ နအဖအဏာရူးတွေနဲ့ဆက်ဆံပါ
အောင်ဆန်းဦးဟာ မွေးသဖခင် ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုမှ မထောက် မိန်းမယုတ်
ကျန်းမာရေးအရဖြစ်စေ ဆင်ခြေပေးအကြောင်းမပြဘဲ မိမိရဲ့အမိအဘဂုဏ်သိက္ခာ ကိုယ်ရဲ့ 
ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်းသိန်းစောင့်ရှောက်တဲ့ အမျိုးသားကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ခံယူခဲ့
အောင်ဆန်းဦးအနေနဲ့အသက်ကြီးပြီး နောင်တရရမယ့်အစား မိန်းမယုတ် လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းရဲ့ 
ကြိုးကိုင် ချုပ်ကိုင်မှုတွေကို မလွန်ဆန်ရဲဘဲ အောင်ဆန်းဦးအမည် အသုံးချတာကို ဆက်လက်
ခံနေပြီး အဖေဗိုလ်ချုပ် (ဦး) အောင်ဆန်း၊ အမေ ဒေါ်ခင်ကြည်တို့ မျက်နှာကို သားရင်းဖြစ်သူ
ကိုယ်တိုင်က အိုးမည်းသုတ် ဖျက်ဆီးပစ်နေပါတယ်။
အောင်ဆန်းဦးအနေနဲ့အမှန်တကယ်လုပ်သင့်ခဲ့တာက တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးမျက်နှာထောက်ပြီး
မိန်းမယုတ် လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းရဲ့မဟုတ်မမှန်လုပ်ရပ်တွေကို ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခဲ့ရမှာပါ။
ညီမရင်း ဖြစ်သူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် အကိုရင်းဖြစ်သူကိုယ်တိုင်က ရဲရဲရင့်ရင့်နဲ့ 
အကာအကွယ်ပေး စောင့်ရှောက်မှုတွေ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာပါ။
ယခုကတော့အောင်ဆန်းဦးဟာမိန်းမယုတ်လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းရဲ့မျက်နှာတစ်မျက်နှာထဲကြည့်ပြီး မလွန်ဆန်နိုင်တာတွေ ကျန်းမာရေးမကောင်းတာတွေ အကြောင်းပြပြီး မိမိရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို မိမိ
ကိုယ်တိုင် အဖတ်ဆည်မရအောင် ကျဆင်းစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ထိုက်တန်တဲ့ တုန့် ပြန်
မှုတွေကိုပြည်သူတွေကနေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အောင်ဆန်းဦးအနေနဲ့အချိန်မီပြန်လည်အဖတ် ဆည်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောင်ဆန်းဦး ဘာလုပ်သင့်သလည်းဆိုတာ အောင်ဆန်းဦး သိမှာပါ။
ဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ဆက်လက်နှောင့်ယှတ်နေဦးမယ်၊ နအဖအာဏာရူး
တွေနဲ့ဆက်လက်ဆက်ဆံနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့အောင်ဆန်းဦးဟာအမျိုးသားသစ္စာဖောက်၊ မိဘဂုဏ်ကျေးဇူးအပေါ် သစ္စာဖောက်၊ သွေးသားညီမအရင်းအပေါ် သစ္စာဖောက်သူ ဆက်လက်ဖြစ်
နေမှာဖြစ်ပြီး လူသေပြီးနောက်တောင် နာမည်ပျက်နဲ့သစ္စာဖောက် အောင်ဆန်းဦးအနေနဲ့ 
သမိုင်းမှာ ဖျက်မရတဲ့ အမည်းစက် တင်ကျန်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်အဖြစ်သာမက ကမ္ဘာ့တစ်ဝှန်းလုံးက နိုင်ငံတကာအစိုးရများ
ကိုယ်တိုင်ကပါ ဂုဏ်ပြုချီးကျူးထားခြင်းကို ခံရတဲ့ နိုဘယ်ငြိမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို
အကိုဖြစ်သူ အောင်ဆန်းဦးနဲ့လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းတို့ ကနေ နေအိမ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး တရားစွဲဆိုမှု
ပြုလုပ်နေတာဟာ သာမန် မိသားစုအရေးပြဿနာမဟုတ်ဘဲ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေရရှိရေးကို
အနှောင့် အယှက်ပေးနေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အောင်ဆန်းဦးနဲ့လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းဟာ အမျိုးသား
ထို့အတူအမေရိကန်နိုင်ငံကနေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးကြိုးပမ်းမှုကို ပံ့ပိုးအားပေးနေမှုကို အမေရိကန်နိုင်ငံသားခံယူထားကြသူများဖြစ်တဲ့ အောင်ဆန်းဦးနဲ့ လဲ့လဲ့နွယ်သိန်း
တို့ကဆန့်ကျင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးအနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံအပေါ် သစ္စာဖောက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံကနေစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားတဲ့အာဏာရူးနအဖတွေနဲ့ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းစီးပွားရေး ဆက်ဆံမှုတွေတိုက်ရိုက်သွားရောက်ပြုလုပ်နေပြီးရရှိနေတဲ့ငွေကြေးဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကို အောင်ဆန်းဦးနဲ့လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းတို့ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာပြန်လည်သုံးစွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့အောင်ဆန်းဦးနဲ့လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းတို့ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံဥပဒေများအရ အရေးယူသင့်နေပါပြီ။
ဒီကိစ္စကိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေထိုင်နေကြတဲ့မျိုးချစ်မြန်မာများအနေနဲ့ဖေါ်ထုတ်တင်ပြပြီး အောင်ဆန်းဦးနဲ့ လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူထားမှုတွေကို
စုံစမ်းစစ်ဆေး အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့တရားဝင် တောင်းဆိုသင့်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိကြတဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းအောင်ဆန်းဦးနဲ့လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းတို့ကို ရှုတ်ချကန့်ကွက်မှုတွေ၊အောင်ဆန်းဦးနဲ့လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းတို့လိုအမျိုးသားသစ္စာဖောက်တွေရဲ့ ယုတ်မာတဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုတားဆီးဟန့်တားမှုတွေပြုလုပ်သင့်ပြီးမြန်မာပြည်သူပြည်သားများ လွတ်မြောက်ရေးလမ်းခရီးမှာ ခလုတ် စူးငြောင့်လို ဒုက္ခပေးနေတဲ့သူတွေကို ဒီအတိုင်း လက်ပိုက်
ကြည့်ကာ ခွင့်လွတ်နေရမယ့် အချိန် မဟုတ်တော့ပါဖူး။
နေတဲ့နအဖလက်ပါးစေ အကြီးစားလက်ရုံးများဖြစ်လာပြီး သူတို့ ကိုယ်တိုင် အာဏာရှင်များ
သဖွယ်ဖြစ်လာတာမို့တိုင်းပြည်ရဲ့လူမျိုး အနာဂတ်အတွက် အထူးရင်လေးစရာ ဖြစ်နေပါပြီ။
လုပ်ကြံဖျက်ဆီးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကို လုပ်ကြံဖျက်ဆီးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအတွက်မြန်မာပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးအနေနဲ့လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ဘ၀လုံခြုံမှုကိုအကာအကွယ် ပေးစောင့်ရှောက်ကြရမှာဖြစ်သလိုအနှောင့်အယှက်ပြုသူတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ရမှာအရေးကြီးဆုံး အမျိုးသားရေးတာဝန်တစ်ရပ်လို့ခံယူဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းပေးပို့ ပေးသော ကိုနစ်နေမန်း အားကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
(သုံးရောင်ခြယ် ကျောင်းသားများနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိသားစု ပုံ)
(သုံးရောင်ခြယ်ကျောင်းသား များအမှတ်တရပုံ လေးပါ.။လူစုံတော့မဟုတ်ပါဘူး.။)
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, December 25, 2009 Links to this post
နေအိမ်ပြင်ဆင်နေမှု ရပ်ဆိုင်းခံရသည့် အပေါ်လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သဘောထား...။.
ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၄)ရက်နေ့ ကြာသာပတေးနေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေများ အယူခံအမှုကိစ္စ အတွက် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သွားရောက် တွေဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ရှေ့နေများသွားရောက် မတွေ့ဆုံမှီ တရက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်ပြင်ဆင်နေမှုအား အမေရိကန်၌ နေထိုင်နေသူ အမေရိကန်နိုင်ငံသား အဖြစ်ခံယူထားတဲ့ အကိုဖြစ်သူ ဦးအောင်ဆန်းဦးရဲ့ ရှေ့နေဦးဟန်တိုးမှ ကန့်ကွက်ခဲ့သဖြင့် မြို့တော်စည်ပင်က ရပ်ဆိုင်းခိုင်းခဲ့ပါတယ်....။
အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တဲ့ ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်းက အိမ်ရဲ့လက်ရှိ အခြေအနေကို ပြောဆိုရာမှာ " အန်ကယ်တို့ အမြင်မှာကတော့ နေရတာ အဆင်မပြေဘူးလို့ မြင်ပါတယ်..... ဘာလို့လဲဆိုတော့ အိမ်မှာ မျက်နှာကျက်တွေက အစခွာထားတယ်.... တခြမ်းကို ပြင်ဆင်နေတဲ့ အတွက် အိမ်ရဲ့တခြားဘက်အခြမ်းမှာ သွားနေနေရတာပါ.... အိမ်က ပြင်ဆင်နေဆဲကာလ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဆင်မပြေတာတွေ အများကြီးပေါ့... ပြတင်းပေါက်က သံပန်းတွေတောင် ခွာပြီးပြင်ဆင်ထားရတာ.... အခုလို အိမ်ပြင်ဆင်ရေးကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရတော့ အိမ်ရဲ့ ပြတင်းတံခါးတွေတောင် ပြန်မတပ်ရသေးဘူး.. အဲ့ဒါကို အလုပ်သမားလေးတွေက သစ်သားတွေနဲ့ ပြန်ရိုက်ပေးထားရတာပေါ့....." ဟုရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်...။
နေအိမ်ပြင်ဆင်ဆဲ ကာလမှာ မည်သူမဆို အခိုက်အတန့်တော့ ဒုက္ခရောက်ကြပါတယ်... အိမ်ပြင်ဆင်ပြီး နေသားတကျဖြစ်မှသာ အစစအရာရာအဆင် ပြေကြတာပါ.... ယခုလိုပြင်ဆင်နေတာကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်တာဟာ နေထိုင်နေရသူတွေ အတွက်အင်မတန်မှ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပါတယ်။ လုံခြုံမှုလည်း အနည်းနဲ့ အများထိခိုက် စေပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် နေအိမ်ပြင်ဆင်ခွင့်ရဖို့ မြို့တော်စည်ပင်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးမှ အာဏာပိုင်များနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး ပြင်ဆင်ခွင့်ရလို့ ပြင်ဆင်ခဲ့တာပါ.... ။
ဆက်လက်ပြီး ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်းမှ " ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီကိစ္စအပေါ်မှာ တစုံတရာ Complain တက်ခြင်း မရှိပါဘူး.... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောတာကတော့ အိမ်ပြင်ဆင်ဆဲ ကာလမှာ အိမ်ပြင်ဆင်မှု ရပ်ဆိုင်းတဲ့ အတွက် အဆင်မပြေတာတွေ ရှိပေမယ့် အမှတ်မထားပါဘူး... အမိန့်ပေးတဲ့ ညွန်ကြားချက်ကို လိုက်နာပါမယ်လို့ ပြောဆိုပါတယ် ..... " ဟုရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုပါတယ်... ။
ဒါဟာလူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ အင်မတန်ပျော့ပြောင်းတဲ့ သဘောထားနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို အထိအခိုက်မခံလိုတာ ပေါ်လွင်စေပါတယ်.....။
လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၀၁ခုနှစ်မှ စ၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အကိုဖြစ်သူ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ခံယူထားသည့် ဦးအောင်ဆန်းဦးမှ နေအိမ်ပိုင်ဆိုင်လိုခွင့် နှင့်ပတ်သတ်ပြီး တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်လိုမှု တရားရင်ဆိုင်ရန် စစ်အစိုးရနှင့် ဦးအောင်ဆန်းဦး၏ ဇနီးဖြစ်သူ (မေတ္တာဦး ကလောင်နာမည်ဖြင့် ရွှေအမြူတေ မဂ္ဂဇင်းတွင် ခရီးသွား အခန်းဆက်ဆောင်ပါး ရေးသားနေသူ ဒေါ်သိန်းလဲ့နွယ်(ခေါ်)ဒေါ်လဲ့လဲ့နွယ်သိန်း)တို့ ပါဝင်ပတ်သတ်နေကြောင်း သိရှိရပါတယ်...။ ဦးအောင်ဆန်းဦးကို စစ်အစိုးရမှ မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း ရှေးဟောင်းမြို့တော် ပုဂံတွင် မြေကွက်များပေးခြင်း၊ အိမ်ဆောက်ရာမှ ကူညီပံ့ပိုးခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်သိန်းလဲ့နွယ်(ခေါ်) လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းဘက်မှ ဆွေမျိုးများဟာ ယခုနေပြည်တော် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ရရှိနေပါတယ်။
ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်ရဲ့ ၂၀၀၈ခုနှစ်က နေအိမ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ မူရင်းစာကိုလည်း ကိုဖိုးတရုတ်ဘလော့မှ ပြန်လည် ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်.....
သတင်းပေးပို့ ပေးသော ဒီမိုဝေယံအားကျေးဇူးတင်ပါတယ်.။
မြန်မာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မတင်တင်ထွေး ၏ နာရေးသတင်း နောက်ဆက်တွဲ..။
မြန်မာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မတင်တင်ထွေး အကျဉ်းကျနေစဉ် ကွယ်လွန်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်
သည့် နောက်ဆက်တွဲသတင်းမတင်တင်ထွေးသည် အသက် ၃၈ နှစ်ရှိပြီး အမှတ် ၄၈ (ဘီ)၊
အုဌ်လမ်း ဗဟန်းမြို့နယ်တွင်နေထိုင်သူဖြစ်ပါသည်။ သားသမီး ၃ ယောက်ရှိပြီးအကြီးဆုံးသားမှာ
မတင်တင်ထွေးးသည် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကာလတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ပြီး စစ်ထောက်လှန်း
ရပ်တည်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍၎င်း၊ ထောင်တွင်းဖြတ်သန်းမှုများနှင့် ပတ်သက်၍၎င်း ရပ်တည်ချက် ခိုင်မာသူတဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။
အဖွဲ့ချုပ်ရုံး စည်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့်သွားတွေ့ရန် ပြောကြားခဲ့သည်ဟု သိရှိရပါသည်။
၎င်းသည် သွေးတိုးရောဂါရှိသူတဦးဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက် အင်္ဂါနေ့တွင် အင်းစိန်ဆေးရုံသို့တင်ပြီး နောက်တရက် ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ကွယ်လွန်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ ကွယ်လွန်ပြီးချိန်တွင်
မိသားစုက ၎င်း၏ရုပ်အလောင်းကိုပြန်ထုတ်ရာတွင် ဆူဆူပူပူမလုပ်ရန်အတွက် ထောင်အာဏာပိုင်
ယခုလည်း သူမ၏နာရေးအခမ်းအနားတွင် ဓါတ်ပုံ မထောင်ရန်၊ မချိတ်ရန်အတွက် မြို့နယ်အာဏာ
ပိုင်များက မိသားစုကို လာရောက် ပိတ်ပင်ထားပါသည်။ ၎င်း၏ မိသားစုဝင်တချို့မှာ စည်ပင်သာယာမှ ၀န်ထမ်းများဖြစ်ပြီး အာဏာပိုင်တို့၏ ဖိအားပေးမှုများကြောင့် ၎င်း၏အသုဘအခမ်းအနားကိုအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်များအား ဖိတ်ကြားရန် မ၀ံ့မရဲဖြစ်နေကြပါသည်။
ဖြေကြားပေးမည့်သူမရှိဘဲ ဖြစ်နေသည်ဟု နောက်ဆုံးအချိန်အထိ စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။
ဇေယျာသော် အတွက် အမှတ်တရ.။
မကြားဘဲမနေလိုက်ပါနဲ့......သူ* *ငယ်ချင်း ။ ။
အလုပ်ဟာ မဖြစ်သေးဘူး.....သူငယ်ချင်း ။
'အမှန်တရား' တော့ ဖြစ်ဖို့လိုတယ်...သူငယ်ချင်း ။
မင်းရဲ့နားကို အစွမ်းကုန် စွင့်ပါ
မင်းရဲ့အမြင် အစွမ်းကုန် ဖွင့်ပါ
ကြားလား ?..... မြင်လား ?.... မေ၀၀ါးနဲ့
ငါပြောတာကို မင်းကြားပါစ...သူငယ်ချင်း ။
ဇေယျာသော်သည် ဟစ်ဟော့ ဂီတ ပုံစံသစ်ခေတ်တစ်ခေတ်ကို မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့သည့် ဟစ်ဟော့ အဆိုတော်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ နာမည်ရင်းမှာ ကျော်ကျော်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဟစ်ဟော့ဂီတကို စပြီးမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သောအဖွဲ့မှာ ACID အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး စတင်ခြင်း အယ်လဘမ် ဖြစ်သည်။ ဇေယျာသော်၊ အနဂ္ဂ၊ ဟိန်းဇော်(ကွယ်လွန်)၊ Rဇာနည်၊ ရန်ရန်ချမ်းတို့ ပါဝင်သည့် အက်စစ်တေးဂီတအဖွဲ့ သည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အနုပညာ၊ စီးပွားရေးအရပါ ပထမဆုံး အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့သည့် ဟစ်ဟော့ပ်ဂီတအဖွဲ့ဖြစ်သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ဆရာစံလမ်းမရှိ စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်တွင် ဇေယျာသော်နှင့် အပေါင်းပါ ၆ ဦးအား စစ်အာဏာပိုင်များ၏ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
၂၀၀၈-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၂၀)ရက်နေ့တွင် ဇေယျာသော် အသက်(၂၇) နှစ်ကို နိုင်ငံခြားငွေ ကိုင်ဆောင်မှု ပုဒ်မ ၂၄/၁ အရ ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ်၊ တရားမ၀င် အသင်းအဖွဲ့ ပုဒ်မ ၆/၈၈ နှင့် ၅ နှစ်၊ စုစုပေါင်း ထောင်ဒဏ် ၆ နှစ် ချမှတ်လိုက်ပြီး ယခု ကော့သောင်ထောင်တွင် ကျခံနေရသည်။
ဇေယျာသော်၏သီးချင်းများကို နားထောင်ခဲ့ရင်း.. သူ့အတွက် အမှတ်တရ အနေနဲ့
သူ၏ကဗျာ များပြန်လည်ဖော်ပြ ခြင်းသာဖြစ်ပြီး ဇေယျာသော်အား ဤနေရာမှဂုဏ်ပြုလိုက်ပါသည်.။
ဗဟန်းမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချူပ် လူငယ် နိုင်ငံရေးအကျဉ်သား မတင်တင်ထွေး နာရေးသတင်း..။
အဖွဲ့ချုပ်လူငယ် အမျိုးသမီးတယောက် မနေ့ကဘဲ ဆုံးသွားတယ်လို့
နာမည်ကမတင်တင်ထွေးပါ။၂ဝဝ၇ရွေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှုမှာထောင်၃ နှစ်ကျပြီး မကြာခင်အင်းစိန်
ဆေးရုံကိုထုတ်ပြီးဆေးကုသမှုကိုခံယူပါတယ်။အပြင်ဆေးရုံတွင်တက်ရောက်ဆေးကုသခံယူနေစဉ် အတွင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမတင်တင်ထွေးသည် ၂၃ရက်နေ့တွင် ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။
ကိုအာဏာပိုင်များကပြောကြားပါတယ်။၂၃ရက်နေ့မှာဆုံးပြီး ၂၅ ရက်နေ့မှာ အသုဘ ချပါမယ်။
မတင်တင်ထွေး မှာ ဗဟန်းမြို့နယ်မှာနေပါတယ်၊
ဤသို့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ မသေဆုံးသင့်ဘဲသေဆုံး ရသည့်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ
အကျဉ်းထောင်များ၌လုံလောက်သောဆေးဝါး များမရှိခြင်း။ ထိထိရောက်ရောက် ဆေးဝါးကုသမှု
မပေးခြင်း။ဆေးဝန်ထမ်းများအားလဲတတ်ကျွမ်းနားလည်သော ဝန်ထမ်းများကို ထားရှိမှုမရှိခြင်း။
မတင်တင်ထွေးလို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား များဟာမသေသင့်ဘဲအသက်ဆုံးရှုံးမှု မျိုးတွေကို
များစွာတွေ့မြင် နေရပါသည်.။အာဏာပိုင်များ၏ လူသားခြင်းစာနာထောက်ထားမှု မရှိခြင်းများဟာ
တနေ့တခြား ပိုမိုဆိုးးရွာမှု တွေကို လုပ်ဆောင်နေကြောင်းကို ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်စေပါသည်.။
မတင်တင်ထွေး၏နာရေးသတင်းအား ပြည်ပတွင် ရောက်ရှိ နေကြသော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်
အဖွဲ့ဝင် များအား အကြောင်းကြားအပ်ပါတယ်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, December 24, 2009 Links to this post
ကိုညီညီအောင် ခေါ် ကိုကျော်ဇောလွင် အတွက် အမေရိကန်လွှတ်တော် အမတ်များ၏ တောင်းဆိုချက်....။
ko nyi nyi aung
ကိုညီညီအောင်ခေါ် ကိုကျော်ဇောလွင် ရဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးမှတ်တမ်းလေးပါ....
အကိုဖြစ်သူ၏ကန့်ကွက်မှုကြောင့် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏နေအိမ်ပြင်ဆင်မှုကို ယနေ့ ညနေမှစပြီးစည်ပင်သာယာမှရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း..။
နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ချထားခံရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်ပြင်ဆင်နေမှုအား အကိုဖြစ်သူ ဦးအောင်ဆန်းဦး၏ ရှေ့နေဦးဟန်တိုးမှ ကန့်ကွက်သဖြင့် ယနေ့ညနေမှစ၍ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အကျိုးဆောင် ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုပါတယ်။
ဒီကနေ့ ညနေကစပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်ပြင်ဆင်နေမှုတွေကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရပါတယ်။ ဦးအောင်ဆန်းဦးရဲ့ ရှေ့နေဦးဟန်တိုးက ကန့်ကွက်လို့ဆိုပြီး စည်ပင်က ရပ်ဆိုင်းခိုင်းပါတယ်။ ဒီညနေပဲ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရလို့ ပြင်ဆင်နေတာတွေ တိုးလို့တန်းလန်း ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ ဒီအိမ်ပြင်ဆင်ခွင့် ရဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အိမ်ကိုမြို့တော်စည်ပင်မှာ ခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီး ပြင်ဆင်ခွင့်ရလို့ ပြင်ဆင်တာပါ.... အခုနေအိမ်ပြင်ဆင်ခွင့် ရပ်ဆိုင်းရာမှာ မေးမြန်းခြင်း၊ စီစစ်ခြင်းမရှိပဲ ရပ်ဆိုင်းခိုင်းပါတယ်... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကလည်းရပ်ဆိုင်းပေးမယ် ပြောပါတယ် ဟု အကျိုးဆောင် ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုပါတယ်။
လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၀၁ခုနှစ်မှ စ၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အကိုဖြစ်သူ အမေရိကန်နိုင်ငံသား
ခံယူထားသည့် ဦးအောင်ဆန်းဦးမှ နေအိမ်ပိုင်ဆိုင်လိုခွင့် နှင့်ပတ်သတ်ပြီး တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်လိုမှု တရားရင်ဆိုင်ရန် စစ်အစိုးရနှင့် ဦးအောင်ဆန်းဦး၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်လဲ့လဲ့နွယ်သိန်း(မေတ္တာဦးကလောင်နာမည်ဖြင့် သရဖူ မဂ္ဂဇင်းတွင် ခရီးသွား အခန်းဆက်ဆောင်ပါး ရေးသားနေသူ) တို့ ပါဝင်ပတ်သတ်နေကြောင်း၊ ဦးအောင်ဆန်းဦး၏ လက်မှတ်ကို သံရုးံမှ တဆင့်ရယူ စေခဲ့ကြောင်း ထိုစဉ်က အမေရိကန်နိုင်ငံ၌သံမှုးကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေခဲ့သော စစ်ထောက်
ဦးအောင်ဆန်းဦးကို စစ်အစိုးရမှ မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း ရှေးဟောင်းမြို့တော် ပုဂံတွင် မြေကွက်များပေးခြင်း၊ အိမ်ဆောက်ရာမှ ကူညီပံ့ပိုးခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဦးအောင်ဆန်းဦး၏ ဇနီးဒေါ်လဲ့လဲ့နွယ်ဘက်မှ ဆွေမျိုးများဟာ ယခုနေပြည်တော် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ရရှိနေပါတယ်။
သတင်းပေးပို့သူ ဒီမိုဝေယံ အားကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
aljazeera သတင်းဋ္ဌာနက ထုတ်လွှင်တဲ့(Myanmar: Beneath the surface)..။
မွေးရပ်မြေ ရဲ့ အကြောင်း ...။
မွေးရပ်မြေ ရဲ့ အကြောင်း
ကူပါကယ်ပါ တကြော်တကြော် အော်နေရတဲ့
ကျတော့ရဲ့ မွေးရပ်မြေ အကြောင်းနဲ့
ခင်ဗျားတို့ နားထဲကို သံရည်ပူလောင်းပါရစေ။
တော်သူတွေ အကုန် ဘေးဂျောင်း၊
လူငယ်တွေ အကုန် အတွေးစောင်း၊
ခွင်ရှာနိုင်မှ သူဋ္ဌေးလောင်း ဖြစ်နိုင်မယ်။
အစိုးရကအစ သူခိုးဓါးပြတွေ ဆို..
သူများဆီမှာ ကျွန်ခံဖို့ go ကြပေသဗျို့ ။
ခင်ဗျားတို့ စကားလုံးကြီးကြီးတွေက ကော်ပီသံစဉ်တွေပါ၊
စိတ်ထဲမှာပဲ သိမ်းထားနေရတဲ့အိပ်မက်တွေလည်း ခေါက်ရိုးကြေ၊
ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဖြစ်လာတာတွေက ဇောက်ထိုးတွေ။
လူ့သက်တမ်းတ၀က်ကျိုးပြီဆိုတဲ့ အချက်ပေးသံတွေလည်း လာပြန်ပြီ၊
ကျန်တဲ့သက်တမ်းတ၀က်ကို ဆက်လျှောက်လှမ်းဖို့တောင် အီလာပြီ။
‘‘ဆန်တပြည်ကို ၁၅၀၀ တောင်’’ အဲဒါ အဖွားညည်းတဲ့အသံ၊
‘‘မြန်မာပြည်ဟာ ဘယ်သူမှမနေချင်တော့တဲ့ အရပ်ဖြစ်သွားပြီ’’
ဧရာဝတီက လူတွေခမျာ အသက်စေ့၊
အစိုးရ ကုလားထိုင်ကတော့ တချက်မရွေ့၊
သူများဆီမှာ ကျွန်ခံဖို့ go ကြပေသဗျို့........။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, December 23, 2009 Links to this post
စင်္ကြာဝတေး မင်းဖြစ်ချင်သူ ..။
သူကိုယ်တိုင်လည်း စင်္ကြာဝတေးမင်းဖြစ်ချင်သူ အာဏာရူးကြီး
ဤပုံပြင် လေးကိုတင်ပြ လိုက်ရခြင်းကတော့ ပုံပြင်လေးကိုဖတ်ပြီး
ကျမတို့ တိုင်းပြည်တွင်း ၌လည်း ဤသို့သော် ဦးနှောက်နည်းပြီး
ပညာမရှိသော လူတွေ အုပ်ချုပ် နေတာကို တွေးပြီး ယှဉ်လို့ရအောင်
ဟိုရှေးရှေးတုန်းက အာဏာစက် မရောက်နိုင်တဲ့ နေရာ မှာ
လူဆိုးသူခိုးတေလေဂျပိုးတွေ နေတဲ့ အလွန့် အလွန်ကို ကြီးမားတဲ့ နေရာ
အဲ့ဒီနေရာမှာ ဘုရင်မရှိတဲ့အခါကျတော့ ခုဏကောင်တွေ အားလုံးပေါင်းပြီး
အဲ့ဒီလို နဲ့ အမိုက်ဆုံး နဲ့ ဥာဏ်ပညာမရှိဆုံး တကောင်က ဘုရင်ဖြစ်လာပါလေရော့လား.
သူလည်း ဘုရင်ဖြစ်ရော တတိုင်းပြည်လုံးမှာ ရှိတဲ့ ပစ္စည်းမှန်သမျှကို
ငါးမူးနဲ့ ပဲ ရောင်းခိုင်းတော့တယ်။
သုဟာသူ အပြင်မှာ ဘယ်လောက်ပဲ ဈေးများများ သူနိုင်ငံမှာတော့ ငါးမူးပဲ.
တပွဲ ကို ၈၀၀ကျပ် လောက်ဈေးရှိတဲ့ ထမင်းကစားငါးမူး ပဲပေးရတယ်။
တနေ့ မှာတော့ ဒေသန္တရ ဗဟုသုတ ရှာဖို့ ထွက် လာတဲ့ တက္ကသီလ က ဆရာနဲ
့သူရဲ့ အထူးချွန်ဆုံး တပည့် လည်ရင်းပတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံ
ဆရာ တော့အဲ့ဒီဒေသ ကို သိပ်သဘောမတွေ့ ဘူးပေါ့။
သူတပည့် က တော့ မတရား သဘောကျတယ်.
အရာအားလုံး ငါးမူးကို နော်။
သူမှာ က ပိုက်ဆံ ၈သိန်းတောင်ပါလာတာဆိုတော့ တသက်လုံး နေလို့ ရတယ် လို
ပြန်မယ့် အချိန်လည်းရောက်ရော တပည့်ဖြစ်တဲ့သူ ကမပြန်ချင်တော့ဘူး။
ဆရာက ပြောတယ်ဒီမှာ ငါ့တပည့် စဉ်းစာဥာဏ် မရှိတဲ့သူ အုပ်ချူပ်တဲ့
တိုင်းပြည်မှာ မနေ သင့်ဘူးတို့ ဘာတို့ ပေါ့လေ။တပည့် က တော့ နိုးပါ
အနော် ကဒီနေရာမှာနေရင် တသက်လုံး ထိုင်စားနေလို့ ရတယ် ဆရာကြီးရေ
ပညာသင်တာ က အဲ့ သလို နေ ဖို့ ပဲလေ တို့ ဘာတို့ ပြော ပြီးတော့
နေချင်ကြောင်းကို ထိုင်ပြောနေတော့ဆရာ ဖြစ်သူ လက်လျှော့ ရတာပေါ့
ဆရာပြန်ခါနီး သူတပည့်ကို ဂါထာတပုဒ် သင်ပေးလိုက်တယ်။
တပည့်ကြီးရေ တကယ်လို့ ဆင်းရဲ ဒုက္ခတွေ့ နေ ရရင် ဒီဂါထာ ကို တခါရွက်လိုက်
ဆရာရောက်လာမယ် လို့ ပြော ပြီးတော့ ပြန်သွားပါလေရောတပည့် က လည်း ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျား
လို့ ပြော ပြီး အဲ့ဒီ နိုင်ငံမှာ နေခဲ့တော့တာပေါ့ပြီးတော့ ငါးမူးတန် အစားအစာ တွေ စားရင်နဲ့ 
မတရား ကြီး ကို ၀လာတယ်.၊၀တာမှ တကယ် ကို အကြီးအကျယ် ၀လာတာ.။
တရက်မှာ အဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ သူခိုးတယောက် သေဆုံးသွားတယ်ဘာ လို့ လည်း ဆို တော့အမတ်ချူပ်ကြီးရဲ့ နေ အိမ်ကို အုတ်တံတိုင်းအပြင်ဘက်ကနေ ပြီးတော့ မြောင်းဖောက်ပြီး ၀င်တာအုတ်တံတိုင်း ပြို ကျလို့ 
ခေါင်းပြားပြီးသေသွားတယ်။သူခိုးမိန်းမက မကျေနပ်ဘူးဘုရင် ကြီးကို သွားတိုင်တယ်။
အိုဘယ့် ရေရှင် မြေရှင် ခြံစည်းရိုးပိုင်ရှင် ဘ၀ရှင်အမိုက်တကာထိပ်ခေါင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဘုရား
အကျွန် မျိုး ချစ်လင် မတော်မတရား သေဆုံးခြင်းကို ကို တရားမျှတမှု ရှိစေတော်မူပါ
သူုခများ မယားကျွေးရန် စီးပွားရှာ ခြင်းသာ ဖြစ် ပေသည်.မရှိသောကြောင့် ခိုး မိခြင်း ကို
အ ပြစ် ဟု မဆို သင့်ပါအရှင်မင်းကြီးဘုရားပေါ့.။
ဘုရင် ကလည်း တရားမျှတမှုဆိုတာကြီး ကို မြတ်နိုးတတ်သလို လို ဖြစ် လာ တယ်။
အဲ့ဒါနဲ့အမတ်ချူပ် ကြီးကို သေဒဏ် ပေးလိုက်တယ်သေဒဏ်ဆိုတာ က ကြိုးပေးသတ်စေ ပေါ့။
အရှင်မင်းကြီး ထိုအခြင်းအရာမှာ ပန်းရံဆရာနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်း
ပန်းရံဆရာ ကြိုးပေးခံလိုက်ရရောပန်းရံ ကလည်း လျှောက်ပြန်တယ်၊
မှန်လှပါဘုရား အကျွန်နှင့် လားလားမျှသက်ဆိုက်ခြင်းမရှိပါ
ဘိလပ်မြေရောစပ်သူ အလုပ်သမား အသုံးမကျမှုကြောင့် ဖြစ်ပါသည်..။
ဘိလပ်မြေရောစပ်သူ ထိုအလုပ်သမားအားယခုချက်ချင်းပင် သေဒဏ်ပေး၍
တရားမျှတမှုကို တည်ဆောက်အံ့မောင်အလုပ်သမားကလည်းလျှောက်တင်ပြန်တယ်
ဘ၀ရှင်မင်းတရားကြီးခင်ဗျား၊ရေထမ်းသမား ရေပို ဖြည့်ထားသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ရေထမ်းသမားအားသေဒဏ်သူလည်းမခေပါဘူးလျှောက်လိုက်တာကတော့အရှင်မင်းကြီး အကျွန်ရေဖြည့်ခြင်းမှာ ပုံမှန်သာဖြစ်ပါသည်အိုးကြီးနေပါသောကြောင့် ရေပို ထည့်မိခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပါခင်ညားပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် ရေအိုးကြီးစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး၊ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီနေ့ က အိုးလုပ်
နေတုန်း အင်မတန်တောင့်ဖြောင့်တဲ့ အမျိုးသမီးအကျွန်ရှေ့က ခဏခဏ ဖြတ်သွားဖြတ် လာလုပ်
ပါတယ်၊ထိုအမျိုးသမီးအား ငေးကြည့်မိသောကြောင့် အိုးကြီးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဖြတ်လျှောက်သော ထိုအမျိုးသမီးအား သေဒဏ်အမျိုးသမီးက ထပ်လျှောက် ပြန်တယ်။
မှန်လှပါ ကရုဏာ ကြီးမားလွန်းပြီး
အစွန်းရောက်မိုက်ခြင်းတရား ဖြင့် နိုင်ငံတော်ကို သာယာဝပြောလှစေသူဘ၀ရှင်မင်းတရားကြီးရှင်
အကျွန်မျိုးမ ဖြတ်လျှောက်ခြင်းမှာ ဒိုဘီအား အ၀တ်အပ်ထား၍လျှော်ပြီးမပြီး သွားရောင်စစ်ဆေး ခြင်းသာ
ဖြစ်ပါ သည်၊မပြီးသောကြောင့် အကြိမ်ကြိမ် သွားမေးရခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။
ဒီလို နဲ့ ပဲ ဒိုဘီကို လှမ်းခေါ်လိုက်တယ်
ဘုရင်ကြီး မိန့်တော်မုပုံ ကမောင်မင်းအသင်အ၀တ်အစား ကို အချိန်မှီ မလျှော်ဖွပ်နိုင်သောကြောင့် 
ထိုမိန်းမအကြိမ်ကြိမ်ဖြတ်ရ လေသည်ငေးမိသော အိုးထိန်းသည် ကြောင့် ထိုအိုးသည် နဂိုအရွယ်
အစားထက် ကြီးမားလာတော့သည်ရေ ဖြည့်သော လုလင်က ရေ ပို ဖြည့်မိလေရာဘိလပ်မြေ
ရောစပ်သောသူ က ရေများများ လောင်း၍ အင်္ဂ့တေ ပျော့သွားသည်ထို့ ကြောင့် ပင် ပန်းရံဆရာ တည်ဆောက်သော အမတ်ချူပ်ကြီးနေအိမ်အုတ်တံတိုင်း ပြို ကျ၍ သူခိုးသေဆုံးရလေသည်.။
ငါကိုယ်တော်မြတ်၏ သေချာတိကျသော ဆက်ဆပ်တွေးခေါ်မှုကြောင့် အသင်တရားခံ
ပြေးမလွှတ်တော့ချေ။အသင်၏ထင်ရှား ကြီးမားလွန်းလှသော ပြစ်ချက်အတွက် သေဒဏ်
ကံဆိုးချင်တော့ ကြိုးကွင်းက အသေကြီးအလျှော့အတင်းလုပ်လို့ မရ ဘူး။ဒိုဘီက အရမ်းပိန်
လွန်းတဲ့အခါ ကြတော့ ဘယ်လို မှ စွပ်လို့ မရဘူး။
ဘုရင်ကြီးက အသိညဏ် ကြီးမားစွာနဲ့ မိန့် တော်မူတယ်။
ဒီကောင့်ခေါင်းက မတော်ဘူး၊တော်တဲ့ ကောင်ကို ရအောင်ရှာ ပြီး ကြိုးပေးလိုက်ပေါ့။
ဒီလို နဲ့ မင်းချင်းတို့ ရှာလိုက်ကြတော့ ခုဏက တပည့်ကလေး ကို သွားတွေ့ တယ်။
သူက အရမ်းဝနေတော့ ကြိုးကွင်းနဲ့ ကွက်တိဖြစ်နေ တာ ကိုး၊သူကို သေဒဏ် ချလိုက်ရော။
တပည့်က ဆရာပေးတဲ့ ဂါထာကို မန်းမုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ဆရာ ချက်ချင်းရောက်လာတယ်
ဆရာ တပည့် နှစ်ယောက်က တယောက် ကို တယောက် အချက် ပြ ပြီးကြိုးကွင်းထဲ သူဝင်မယ်
ငါဝင်မယ် လို့လုနေလိုက်ကြတာမှ မသတ်ရုံ တမယ် ပဲလို့ ကို ထင် ရတယ်.။
ဘယ့်နှယ် သူများတွေ က သေဖို့ ကြောက်နေတဲ့ အ ချိန်မှာ ဒီနှစ်ကောင်ကြိုးကွင်းကို ပြိုင်လုနေ
ရတာတုန်းဘုရင်ကြီးက မေးလိုက်တာပေါ့၊ဘာ လို့ လည်းပေါ့နော်၊ ဆရာက ဖြေတယ်။
မှန်လှပါ တရားသဖြင့် လောကပါလနတ်မင်းအား အစဉ် ပြုံးရွှင် စေတော်မူသော်
အကျွန်က တက္ကသီလ မှ ဆရာတည်း
ဗေဒင် သုံးပုံ ကို အရည်ကြို သောက်ခဲ့သူ လည်း ဖြစ် ချေတော့သည်တမုံ။
ယနေ့ နက္ခတ် ၊ဂြိုလ် ၊ပက်ကျိ နှင့် ခွေးချီးတို ၏ တည်နေရာအားသေချာတိုင်းတာ၍ စစ်ဆေးကြည့်ရာ
ယနေ့ သေသောသူ သည် သည် မလွှဲဧက မုချအမှန် စင်္ကြာဝတေးမင်း ဖြစ်လတ္တံ့။သို့ဖြစ်ပါ၍ ကြိုးကွင်း
ဘုရင်က အံကြိတ်ပြီး ရှေ့တိုးလာတယ်
သယ်............ငါ ကိုယ်တော်မြတ်ရှိရက်နဲ့ သည်ငမိုက်သားတွေ စင်္ကြာဝတေးမင်း
နင်တို့ ဖယ်ကြကွယ်ရို့ ........ဟူသတည်း........သူကိုယ်တိုင်ကြိုးကွင်းကိုစွပ် ပြီးသေဒဏ်
ကိုင်းပုံ ပြင် လေးကတော့ ဤမျှပါဘဲ .။စင်္ကြာဝတေး မင်းဖြစ်ချင်သူ နှင့် ကျမတို့ တိုင်းပြည်မှာ
ယခု အုပ်ချုပ်နေသော အာဏာရှင် များနှင့် နှိုင်းယှဉ် လိုက်လျှင် ဖမ်းဆီးမယ် ထောင်ချမယ်
သူ့တို့ဘာမှမသိ၊တရားခွင်ကိုလဲလုပ်ချင်သလိုလုပ်ပြီး စဉ်းစားဥာဏ်မရှိတဲ့ကျမတို့ တိုင်းပြည်ကို
အုပ်ချုပ် မင်းလုပ်နေသော ခေါင်းမရှိသောစစ်အာဏာရှင်များနှင့်သူမသာကိုယ်မသာတွေဘဲဆို
တာကို ထင်ဟပ် လို့ရပါတယ်နော်.။
ဓာတ်ပုံ အား ကိုမျိုးချစ်မြန်မာ ဘလော့မှ ကူးယူပြီး ဖော်ပြထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ရှင်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, December 22, 2009 Links to this post
ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံသူ သျှမ်းလူငယ်တဦးအား သုစန္ဒီခေါင်းဆောင်ဆုချီးမြှင့် ..
သီပေါစော်ဘွား စ၀်ကြာဆိုင်နှင့် မဟာဒေ၀ီ သုစန္ဒီ (အင်ဂါ ဆာဂျဲင့်)
ယခင်သီပေါစော်ဘွား မဟာဒေ၀ီ ကမကထပြုသော အမေရိက အခြေစိုက် Burma Lifeline က လူမှုအဖွဲ့စည်းအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံသူ Burma Lifeline အဖွဲ့ဝင် သျှမ်းလူငယ် စိုင်းဆဲန်ဖန်းအား ယခုနှစ် Sao Thusandi Leadership Award သုစန္ဒီ ခေါင်းဆောင်ဆု ဆုရှင်အဖြစ် ရွေးချယ်ဖိတ်ကြားပြီး ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက် ညနေပိုင်းက ချင်းမိုင်မြို့၌ဂုဏ်ပြုအပ် နှင်းပွဲ ကျင်းပခဲ့သည်။
“ဆုပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအနာဂတ်လူငယ်တွေကိုယ်ကျိုးစွန့်တတ်ဖို့၊စံပြအများအကျိုးဆောင်ရွက်သူတွေကို အတုယူ တတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလိုလူငယ်တွေ များများတိုးပွားလာရင် သျှမ်းပြည်ဒီမိုကရေစီအရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အထောက် အကူဖြစ်မယ်” - ဟု သုစန္ဒီဆု အပ်နှင်းရေး ကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်သူက ပြောပါသည်။
၁၉၉၆-၉၇-၉၈ သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ကျေးရွာပေါင်း ၁၅၀၀ ကျော် မီးရှို့ဖျက်ဆီး/အဓမ္မမောင်းထုတ်ခံရပြီး၊ ရွာသား ၆၆၀ ကျော် အသတ်ခံရကာ လူပေါင်း ၃ သိန်းအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဘ၀ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးခိုလှုံခဲ့စဉ်စိုင်းဆဲန်ဖန်းက Dispossessed အစီရင်ခံစာထုတ်ဝေရေး၌ အချက်အလက် ရှာဖွေစုဆောင်းပေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ဆန်စပါးဒုတိယအများ ဆုံးထွက်သည့် သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း မိုးနဲမြ့နယ် စပါးထွက်နှုန်း အနိမ့်ဆုံးကျဆင်းမှုအပေါ် Deserted Fields ဆိုသည့် အစီရင်ခံစာ ရေးသား ထုတ်ဝေနိုင်ရန် အချက်အလက်စုဆောင်းခဲ့သောကြောင့် သုစန္ဒီဆုနှင့်အထူး ထိုက်တန်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
“သျှမ်းပြည်မှာနေတုန်းက ဗမာစစ်တပ် အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်လို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်ကတည်းက သူထိုင်းထဲဝင်လာတယ်။ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားဘ၀နဲ့နေထိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဘ၀ကိုအရှုံးမပေးဘူး။ တိုးတက်လမ်းရှာတယ်။ စစ်သလင်းထဲ အကြိမ်ကြိမ် သွားရောက်ပြီး မတရားမှုတွေကို သူဖေါ်ထုတ်ခဲ့တယ်။ စိုင်းဆဲန်ဖန်းဟာ ရဲရင့်ပြတ်သားတယ်။ အမှန်တရား ပြောဖို့ ၀န်မလေး ဘူး၊ မဟုတ်မမှန်ရင် သူ့ကိုထောက်ပံ့တဲ့ ဒိုနာတွေကိုတောင် သူထောက်ပြရဲတယ်။ အဲဒါ့ကြောင့် သူ့ကို ရွေးချယ်ရခြင်းဖြစ် တယ်”- ဟု BRC အကြီးအကဲ ဆရာမ ဖိဖါ့ ကလဲ ဂုဏ်ယူပြောဆို၏။
“ကျနော်တယောက်ထဲ ချီးမြှင့်တယ်လို့ မခံစားမိဘူး၊ SRDC (Shan Relief and Development Committee) နဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင် ဖက်အားလုံးကို ချီးမြှင့်တယ်လို့ယူဆပါတယ်” - ဟု စိုင်းဆဲန်ဖန်း က အခမ်းအနားတွင် ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြား၏။
စိုင်းဆဲန်ဖန်းသည် သျှမ်းပြည်အမျိုးသားလူငယ်များကျောင်း SSSNY ကျောင်း ဒုတိယအပတ်စဉ် ကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့၏။ နောက်ပိုင်း FAT (Foreign Affair Training) ကျောင်းနှင့် ထိုင်းစာသင်တန်းကျောင်းများတက်ပြီး ဘ၀တိုးတက်လမ်းရှာကာ တဘက်တွင်လည်း SRDC (Shan Relief and Development Committee) မှ ပေးအပ်သည့်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း တာဝန် များ စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ပေးအပ်သည့် ၂၀၀၈ သုစန္ဒီခေါင်းဆောင်ဆုကို သျှမ်းရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားအရေးလုပ်ရှား သူ Migrant Justice Program of the Human Rights Development Foundation (HRDF) မှ သျှမ်းလူငယ် စိုင်းဖူးမိန်းက ပထမ အကြိမ်လက်ခံ ရရှိသည်။
သုစန္ဒီခေါင်းဆောင်ဆု Thusandi Leadership Award ကို သီပေါစော်ဘွားကြီး၏ မဟာဒေ၀ီ သြစတေးလျလူမျိုး အင်ဂါ ဆာဂျဲင့် ခေါ် စ၀်သုစန္ဒီက စီစဉ်ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စ၀်သုစန္ဒီသည် ၁၉၆၂ စစ်အစိုးရ အာဏာသိမ်းပြီး သီပေါ စော်ဘွားကြီး စ၀်ကြာဆိုင် ဖမ်းဆီးအစဖျောက်ခံရပြီးနောက်ပိုင်း ဇာတိမြေပြန်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် Twilight over Burma ‘မုံရီမှိုင်း တိုင်းမြန်မာ’ စာအုပ်ရေးသားပြီး နောက်တနှစ်အကြာ Burma Lifeline ခေါ် ဗမာပြည် ဒုက္ခသည်များ ကူညီရေးဆိုင်ရာ NGO အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့သည်။
(သရုပ်ဖေါ် ပန်းချီ ဦးဝင်းဖေ)
ကျပြီးသား မျက်ရည်ကိုပဲ တစ်ခါ
အဖြစ် အပျက်တွေဟာ ဒီလိုပဲ
လူတွေ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ချစ်မက်ကြတာ ဒီလိုပဲ
လူတွေ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ကျွန်ပြုကြတာ ဒီလိုပဲ
လူတွေ အဆောက်အဦးတွေ ဖြိုကြ ဆောက်ကြတာ ဒီလိုပဲ။
တကယ်တော့ စစ်ပွဲတွေဟာလဲ ဘာမှမထူးဆန်းဘူး
တကယ်တော့ ရှင်ဘုရင်ဆိုတာလဲ ဘာမှ မထူးဆန်းဘူး
တကယ်တော့ အင်္ဂါဂြိုလ်ဆိုတာလဲ ဘာမှ မထူးဆန်းဘူး
တကယ်တော့ ငါတို့သိပြီးသား ကမ္ဘာကြီးနဲ့
ရနံ့တွေ၊ အိပ်မက်တွေ၊ ဒုက္ခတွေ၊ အရသာတွေ
ဓါတ်တိုင်တွေ၊ ငှက်တွေ၊ ဆူညံသံတွေ၊ ရမ္မက်တွေ
ကျွန်တော်တို့ မဆုတ်မနစ် စေးကပ်ငြိတွယ်မိရာ လောကကြီး
သမိုင်းဖတ်စာထဲမှာ ဗီလိန်များ၊ သူရဲကောင်းများ
ကျွန်တော်တို့ အစီအစဉ်တကျ အစီစဉ်မဲ့စွာ
လူတွေ မိမိစိတ်ကို မိမိစူးစမ်းဖို့ရာ မေ့လျော့နေကြ
လူတွေ ကိုယ့် ယုတ္တိနဲ့ကိုယ် လုံလောက်နေခဲ့ကြ
လူဆိုတာ အမြဲတမ်း ပြာယာခတ်နေတတ်ကြ
လူဆိုတာ သူတို့လိုချင်တဲ့အရာကို သူတို့ မဝေခွဲတတ်ကြ
လူဆိုတာ သူတို့မွေးမြူတဲ့ ဒုက္ခကို သူတို့ မခံနိုင်ကြ
ငါတို့ဟာ စစ်ပွဲကြီးတွေ အကြောင်း
ငါတို့ဟာ လေယာဉ်ပျံတွေ တီထွင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်
ငါတို့ဟာ ရာဇ၀င်ခေတ်ကြီးတွေ ထူထောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်
ငါတို့ဟာ ဧည့်ခံပွဲတွေ တက်ခဲ့ကြတယ်
ငါတို့ဟာ စကားလုံးတွေ ရေရွတ်ခဲ့ကြတယ်
ငါတို့ဟာ ‘ဆင်းရဲ ဒုက္ခ ကင်းပကြပါစေ’
ကလေးတွေ ပြေးလွှား ကစားကြတယ်၊ ဂျုံတွေ စိုက်ကြတယ်
အရာရာဟာ ဒီလိုပဲ၊ ဘာမှ မထူးဆန်းဘူး
အမှားအယွင်းတွေ၊ ဘာမှ မထူးဆန်းဘူး
မြစ်ရေကြီးတာ၊ ဘာမှ မထူးဆန်းဘူး
ကပ်ကြီးသုံးပါး၊ ဘာမှ မထူးဆန်းဘူး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပေါ့ဆမှုများ၊ ဘာမှ မထူးဆန်းဘူး
အဆန်းတကြယ် ရရှိမှုများ၊ ဘာမှ မထူးဆန်းဘူး
ဘ၀ခရီး ဖြတ်သန်းကြတယ် ဆိုတာကလဲ
တစ်ကြိမ်ပြန် ရွက်လွှင့်ရတာမျိုးပဲ မဟုတ်လား။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, December 21, 2009 Links to this post
အင်္ဂါနေ့အား တပတ်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့မေတ္တာနေ့ အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးနေရာအနှံ့မှာမေတ္တာသုတ်ရွတ်ဆိုကြပါရန်။
အင်္ဂါနေ့အား တပတ်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ မေတ္တာနေ့ အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး မေတ္တာသုတ်ကို နေရာအနှံမှာ ရွတ်ဆိုကြပါရန် နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
အကယ်၍ မိတ်ဆွေတို့ အနေနှင့် မေတ္တာသုတ်မရလျှင်စီဒီ ကက်ဆက်ခွေဖွင့်ပြီး နေရာတိုင်း အိမ်တိုင်းမှာ အနုနည်းဖြင့် အိမ်ထဲကနေ မေတ္တာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် တောင်းဆိုကြပါရန် အထူးတောင်းဆို မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားသူများအဖွဲ့
International Peace Makers
အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ အေအိုင်ဒီအက်စ် ကူးစက်ခံ ကလေးသူငယ်များအတွက် စာနာမှု ကဗျာရွှတ်ပွဲအတွက် ၂၀ ရက် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၀၉ အင်ယားကန်စောင်း စိမ်းလန်းစိုပြေဥယျာဉ်မှာကျင်းပသွားပါသည်။
၁၀။ သူရဿဝါ ( လင်းနေတဲ့အပိုင်းဆို မင်းတို့ပဲလုပ်ထားတာ မှောင်နေတဲ့အပိုင်းတွေက ငါတို့အပြစ်လို့ရှိပါစေ)
၁၂။ မင်းယွန်းသစ် ( မေ့မေ့ဆီရေးတဲ့ စာမျက်နှာမှာ ခြစ်ရာတွေဗရပွနဲ့)
စတဲ့ကဗျာ တွေကိုရွတ်ဆိုခဲ့ကြပြီ… ကဗျာချစ်သူများပါ ပါဝင်နိုင်တဲ့ ပါဖောင့်မန့်အက် ကဗျာကိုလည်း စုစည်းရေးစပ်ခဲ့ကြပါတယ်…
HIV .. သရုပ်ဖော်.. ပြကွက် တစ်ခုကို ပါဝင်ပြသခဲ့ပါတယ်... ကဗျာများကို.. မအိဒြာ၊ မင်းယွန်းသစ်၊ သူရသ၁၀ါ၊ မောင်ဖုန်းမြင့်၊ သွယ်လင်းဆက်၊ မိုးလှိုင်ည၊ Mirror ၊အမည်မဲ့ HOE၊ သိုးထိန်း
စတဲ့ကဗျာဆရာများကပါဝင်ရေးဖွဲ့ ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်...။ ကဗျာကိုမြတ်နိုးကြတဲ့လူငယ်များနဲ့ ဂျာနယ်လစ်များ.. လူမှုရေးလုပ်ငန်းများစိတ်ပါဝင်စားသည့် လူငယ်များ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်..။
အဖွင့်သီချင်းအနေနဲ့ တိုချစ်တဲ့ကမ္ဘာ တို့ချစ်တဲ့ကလေးတွေ သီချင်းကိုစုပေါင်းသီဆိုကြပြီး... Michale Lann- Sleeping Child .. သီ ချင်းနဲ့ ကဗျာရွတ်ပွဲလေးကို အဆုံးသတ်ခဲ့ကြပါတယ်..။
ကျွန်တော်တို့မှာ ခေါ်စရာ အမေ မရှိခဲ့ဘူး
စီးဆင်းမြဲစီးဆင်းနေတာက အပေါင်းထပ်တင်ထားတဲ့အိပ်ခ်ျ အိုင်ဗွီ ပိုးတဲ့ ။
အိပ်ခ်ျ အိုင် ဗွီ (HIV)ပိုးဆိုတဲ့ အပေါင်းထပ်တင်ထားတဲ့သတ္တ၀ါက
နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဆိုတာ သေ ခြင်း တ ရား လား ။
ကျွန်တော်တို့ အတွက် အလင်းပျိုးမယ့်လက်များကို မျှော်နေပါတယ် ဗျာ ။
အထီးကျန်မှုတွေ တစူတဝေးနဲ့ ရှင်သန်ရတယ်
ကျွန်တော် မသိလိုက်ခင်ပဲ ဒီရန်သူက
ဖေဖေ နဲ့ မေမေ ရေ...........
ဒီအရိပ်မဲကြီးက ရိုးခနဲ ရိပ်ခနဲ
ကျွန်တော် ဘာများမှားခဲ့လို့ လဲ
................. ၊၊ ၊၊
မင်းကို ငါတို့ လက်ကမ်းလို့ကြိုမယ်..........
Ryan Wayne White (6/20/1971 - 8/4/1990) ~ အသက် (၁၃)နှစ် အရွယ်တွင်
သွေးသွင်းရာမှ HIV ကူစက်ခံရပြီး ကမ္ဘာ့ AIDS ရောဂါတိုက်ဖျတ်ရေးပိုစတာတွင်
Poster Child အဖြစ်ရိုက်ကူးဆောင်ရွက်ရင်း ရင်ဆိုင်မှုပေါင်းများစွာဖြင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို သိစေခဲ့သူ။
မြေပထ၀ီအခွံပေါ်မှာ ဘာတွေကို စုပ်ယူဖို့၊
သက္ကရာစ်ပေါင်းအခု ၂၀ ကျော်။
ခြေထောက်တွေက ခုထိမခိုင်သေးဘူး ..။
ကျမအသက် ၆၀ မဟုတ်ဘူး အမေ..
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ရော အခွင့်အရေးတစ်ခု ရရှိဖူးပြီးခဲ့ပြီလား။
အဲ့ဒါတွေ ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတာ ငါလဲသေချာမသိသေးဘူး။
အဲ့ဒါတွေ ဘယ်လောက်အတိမ်အနက်ရှိလဲ ငါမသိသေးဘူး။
ငါတို့လိုချင်တပ်မက်တဲ့ အာသီသကို ဖြေဖျောက်ဖို့ရာ..မလွယ်ကူလှဘူးထင်ရဲ့....။
မြန်နှုန်းမြင့်စိတ်နဲ့ပဲ မေမေ့ကို ဆက်သွယ်လိုက်တယ် ။
ကျွန်တံဆိပ်တီရှပ်က အသက်ရှုကျပ်တယ် မေမေ ။
ဘာကြောင့်များလဲ . . .
သူတို့က စစ်ပွဲမှာ လိုက်ပါခွင့်မရခဲ့တာလဲ၊
သူတို့ မှာ လကမ္ဘာကိုလည်ပတ်ချင်စိတ်ရှိမယ်
ပန်းနဲ့ သီတဲ့ ဒိုင်ယာရီတွေ ရေးချင်လိမ့်မယ် ...
မနက်ဖြန်တွေ သူ့ အတိုင်းသူ ရှိနေစေဖို့ လေ။ .
အနာဂတ်ဆိုတဲ့ ယာဉ်ကြီးကို သူတို့ စီး
နယူတန်လိုပဲ ပန်းသီးတွေကို သူတို့ ကောက်ကြ
ကမ္ဘာကြီးကို သူတို့ လက်ချောင်းလှလှ လေးတွေနဲ့ပုံသွင်းကြ ...
သူတို့အတွက်ရနိုင်သမျှ ပေးဆပ်ခြင်းတွေနဲ့ 
သူတို့ဦးခေါင်း တွေ မြင့်မြတ်နိုင်ကြစေ၊
ဒါဟာ . . . နောင်လာမယ့်သမိုင်းကြောင်းအတွက်
စာကြွင်း- ကဗျာ နှစ်ပုဒ်ခန့် ကြွင်းကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်.. အမြန်ပြန်စုဖို့
ကဗျာဆရာ တချို့နဲ့ လတ်တလော အဆက်သွယ်မရလို့ပါ.. ။
အတူ performance တစ်ခုကို ပျော်ပျော်ပါးပါး ပူးပေါင်းဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့ အထူးအစီအစဉ်အနေဖြင့် HIV စာလုံးအား ပူးပေါင်း သရုပ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့ Michel Learns ရဲ့ Sleeping Child သီချင်းကို ကိုသားငယ်M.B.S နှင့် ကိုလင်းနစ်တို့မှ ဂစ်တာဖြင့်တီးခတ်ပေးပြီး တက်ရောက်လာသူများအားလုံးမှ သံပြိုင်သီဆိုကာ အခမ်းအနားကို ရုတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ပွဲလေးမှာ စုစုပေါင်း အလှူငွေ သုံးသိန်းငါးထောင် (၃၀၅၀၀၀) ကျပ်တိတိရရှိပါတယ်။ထိုအလှူငွေများဖြင့် လာမည့် 25.12.2009 တွင် မြောက်ဒဂုံ သုခရိပ်မြုံမိဘမဲ့ကလေးကျောင်းသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
သတင်းပေးပို့ ပေးသော မောင်လေး စိုင်းငယ် အားကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
ဓာတ်ပုံ ပေးပို့ ပေးသော ကိုလူချော အားကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
ကဗျာများရွတ်ဆိုအပြီးမှာတော့ အခမ်းအနားတက်ရောက်လာသူများနှင့်အတူ performance တစ်ခုကို ပျော်ပျော်ပါးပါး ပူးပေါင်းဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့ အထူးအစီအစဉ်အနေဖြင့် HIV စာလုံးအား ပူးပေါင်း သရုပ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့ Michel Learns ရဲ့ Sleeping Child သီချင်းကို ကိုသားငယ်M.B.S နှင့် ကိုလင်းနစ်တို့မှ ဂစ်တာဖြင့်တီးခတ်ပေးပြီး တက်ရောက်လာသူများအားလုံးမှ သံပြိုင်သီဆိုကာ အခမ်းအနားကို ရုတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ပွဲလေးမှာ စုစုပေါင်း အလှူငွေ သုံးသိန်းငါးထောင် (၃၀၅၀၀၀) ကျပ်တိတိရရှိပါတယ်။ထိုအလှူငွေများဖြင့် လာမည့် 25.12.2009 တွင် မြောက်ဒဂုံ သုခရိပ်မြုံမိဘမဲ့ကလေးကျောင်းသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ပေးပို့ ပေးသော မောင်လေး စိုင်းငယ် အားကျေးဇူးတင်ပါသည်..။
ကလိမ်ကကျစ် ကကြိုးဆွဲနေတဲ့ မိန်းမယုတ် လဲ့လဲ့နွယ်သိန...
သံတိုင်ကြားက N.L.D လူငယ်များရဲ့ ထောင်တွင်းမေ့လို့မ...
နေအိမ်ပြင်ဆင်နေမှု ရပ်ဆိုင်းခံရသည့် အပေါ်လူထုခေါင်းေ...
မြန်မာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မတင်တင်ထွေး ၏ နာရေးသတင်း...
ဗဟန်းမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချူပ် လူငယ်...
ကိုညီညီအောင် ခေါ် ကိုကျော်ဇောလွင် အတွက် အမေရိကန်လွှ...
ကိုညီညီအောင်ခေါ် ကိုကျော်ဇောလွင် ရဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးမှ...
အကိုဖြစ်သူ၏ကန့်ကွက်မှုကြောင့် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်ေ...
aljazeera သတင်းဋ္ဌာနက ထုတ်လွှင်တဲ့(Myanmar: Beneath...
ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံသူ သျှမ်းလူငယ်တဦးအား သုစန္ဒ...
အင်္ဂါနေ့အား တပတ်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့မေတ္တာနေ့ အဖြစ်သတ...
မြန်မာ ပေါ့ အဆိုတော် MTV EXIT ကင်ပိန်း သံအမတ်အဖြစ်...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မှတ်သားသင့်သေ...
(KNU) ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ကြေငြာချက်.။
မျက်မှောက်အခြေအနေနှင့် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများရဲ့ လ...